Naratra mafy ihany ilay ramatoa na izany aza, satria voatsindron’ny antsy teo amin’ny tratrany. Nahitana « formol », « scotch » ary fanindronna tany amin’ilay lehilahy.
« Tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany no nifanao fotoana tao amin’ny efitrano iray tamina trano fandraisam-bahiny lehibe eny Tsiazotafo ny lehilahy iray izay milaza fa mivarotra volamena sy ilay vehivay milaza fa hividy. Rehefa tafiditra tao amin’ny efitra nisy ilay lehilahy ramatoa dia nisy horakoraka henon’ny mpiasa tao amin’ilay trano fandraisam-bahiny. Niantso polisy avy hatrany izy ireo vokatr’izany », hoy ny tatitry ny kaomisera Ranaivoson Alexandre, tompon’ny andraikitry ny fampitam-baovao eo anivon’ny polisim-pirenena.
Nanao tari-dositra ilay jiolahy rehefa hitany fa tsy nanaiky lembenana ilay vehivavy. « Nitsambikina avy any amin’ny rihana fahatelo nisy azy ireo ilay lehilahy dia nianjera tao ambonin’ny tafotranonay. Avy eo dia nitsambikina tany ambany. Efa nitangorona niandry azy teo ambany anefa ny olona maro ka saika matin’ny olona teo izy, raha tsy tonga haingana ny polisin’ny GIR », hoy ny tompon’ilay trano teo akaikin’ilay trano fandraisam-bahiny nisy ity tranga ity.
« Tombana ho saika hamonoan’ity lehilahy ilay ramatoa ireo zavatra hita tany aminy ireo. Ilay vehivavy anefa tamin’io tsy mbola nitondra vola satria saika hiresaka fotsiny aloha. Efa nomanina mihitsy ity asa ratsy ity satria samy hafa avokoa ny anaran’ilay lehilahy na izy tany amin’ilay trano fandraisam-bahiny na izy teny amin’ny hopitaly tsaboina », hoy ireo polisy tonga teny an-toerana. Tsaboina eny amin’ny hopitaly ihany koa ilay ramatoa.